जीवनसाथीलाई यी कुरा भन्न भुल्नु त भएन ? – rastriyakhabar.com
जीवनका केही कुरा कसैलाई पनि भन्न हुन्न जसले तपाईको जीवनमा असर गर्नेछ । तर यस्ता केही कुरा छन् जसलाई तपाईले भन्नु भएन भने तपाईलाई असर पर्छ । केही यस्ता विषय छन् जसलाई तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई भन्ने पर्ने हुन्छ । यदी तपाईले भन्नु भएन भने तपाई समस्यामा पर्न सक्नु हुन्छ ।
यस्ता कुरा लुकाइयो भने दाम्पत्य सम्बन्धकै औचित्य हुँदैन र आपसी सम्बन्धमा रहेको विश्वास डगमगाउँछ । सुमधुर सम्बन्धका लागि जिवनसाथीलाई भन्नैपर्ने कुरा यस्ता छन् :
सहवास : तपाईं तत्काल सम्भोगका लागि मूडमा हुनुहुन्न तर पार्टनरले तपाइँलाई आग्रह मात्र होइन कर नै गरेको हुनसक्छ । तर तपाइँ यो मामिलामा बोल्नैपर्ने हुन्छ, मनमा कुरा लुकाउनु हुँदैन । आफुलाई सहवासमा रुची छैन भने आफ्नो पार्टनरसँग भन्नुहोस् र कुरा बुझाउनुहोस् । दुबैजना तयार नभएसम्म गरिने सम्भोग रुचिकर हुँदैन र निरर्थक हुन्छ भन्ने कुराको बोध गराउन सक्नुपर्छ, ता की दुबैजनाको मूड खुलेको बेलासम्म पार्टनरले पर्खिन सकोस् ।
अपेक्षा : विवाह नगर्दैको पार्टनरसँगको हकमा विचार गर्दा यो सम्बन्ध कतातर्फ जाँदैछ ? के तपाइँ केही फाइदाका लागि कसैसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? के सोही मानिससँग जिवन बिताउने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ ? यस्ता कुरामा तपाइँले पार्टनरलाई खुलस्त बताउनुपर्छ । तपाइँ दुइ बीचको सम्बन्धमा उसले कस्तो अपेक्षा राखिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाइँले थाहा पाउनैपर्छ ।
एकान्तता : चाहे बिहे भैसकेपछि होस् वा अफेयरमा । तपाइँले केही समय एकान्तवास चाहनुभयो भने त्यस्तो मौका जुराउनुपर्छ । तपाइँलाई आफ्नो तनावको व्यवस्थापन, योजना निर्माण, अध्ययन जस्ता कुराहरुका लागि एकान्तवासको आवश्यकता पर्नसक्छ । यस्तोमा तपाइँले खुलस्त आफ्नो पार्टनरसँग भन्नुहोस् ता की एक्लै बस्ने कुराले दुइ जनामा द्वन्द सिर्जना नहोस् । तपाइँले केही नभनिकन कतै हिँड्नुभयो वा व्यवहार परिवर्तन गर्नुभयो भने जिवनसाथीमा अविश्वास सिर्जना हुनसक्छ र सम्बन्धमा खराबी आउनसक्छ ।
किनमेलः चाहे बिहे गरिसकेको पती पत्नीबीच होस् वा बिहे नगर्दैको पार्टनरबीचमा । किनमेलको कुरामा खुलस्त हुनुपर्छ । सानोतिनो कुराको किनमेलमा त सबै कुरा भनिरहनु आवश्यक छैन, तर यदि तपाइँ कुनै महंगो चिज किन्दै हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा पार्टनरलाई जानकारी गराउनुहोस् वा स्विकृति लिनुहोस् । यसका कारण तपाइँले किनेको महंगो चिजका कारण तपाइँको पार्टनरमा आशंका पैदा नहोस्, पैसाको स्रोत वा वेवास्ताको आभाषका कारण ।
व्यवहारः परिवारका सदस्यका नराम्रा व्यवहारबारे खुलस्त भन्नुहोस् । तपाइँले आफ्नो जिवनसाथीको घर जो तपाइँको नयाँ सम्बन्ध गाँसिएको घर हो, त्यहाँका आफन्तको व्यवहार तथा बोली चित्त बुझाउनुभएको छैन भने आफ्नो जिवनसाथीलाई खुलस्त भन्नुहोस् ।
कोही सदस्यले तपाइँको खेदो खनिरहेका छन्, चित्त दुखाएका छन् वा कुनै आरोप लगाएका छन् र सम्बन्धमा अड्चन आउने खतरा उत्पन्न भएको छ भने जिवनसाथीलाई भन्नुहोस् । आफ्नो घरका मान्छेको कुरा लगाउँदा पार्टनर रिसाउला भन्ने नसोँच्नुहोस् । खुलस्त पार्नुभयो भने यसबाट आपसी चिसोपना, खटपट तथा खराब व्यवहार सुल्झाउन सहज हुनेछ र परिवार सँगको सम्बन्ध पनि सुमधूर हुनेछ ।